सल्यानमा अपत्यारिलो घट्ना।अाफ्नै भाईको ८ महिनाको गर्भ रहेको खुलासा! – Newsharpal24
March 14, 2021 March 14, 2021 adminLeaveaComment on सल्यानमा अपत्यारिलो घट्ना।अाफ्नै भाईको ८ महिनाको गर्भ रहेको खुलासा!
सल्यान । सल्यानमा एक १६ बर्षिया किशोरी गर्भवती भएको पाइएको छ । उनको आठ महिनाको गर्भ रहेको पाइएको हो । उनलाई गर्भबारे प्रश्न गर्दा आफ्नै १३ बर्षिय भाइलाई देखाएकी छिन् ।अहिले आफ्नै दिदीलाइ यस्तो गरेको भन्दै ती १३ वर्षीय भाइलाइ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत साउन महिनामा घरमा दुई दिदी बहिनी र भाइ एउटै कोठामा भएको अवस्थामा घटना भएको बुझिएको छ ।
यो घटनाबारे किशोरीले कसैलाइ केही जानकारी दिएकी थिइनन् । किशोरीको बढेको पेट र ब्यवहारका कारण परिवारले आठ महिनापछि मात्र थाहा पाएको थियो । त्यसपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो ।घटना बाहिरिएपछि परीवारले फागुन २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानमा जा हे री दिएका छन् । उनीहरूको चार भाइ बहिनी सहित ६ जना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता लक्ष्मण वलीले जानकारी दिए ।
प्रहरीले ती बालकलाइ फागुनमा २६ गते प क्रा उ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको रहेको जनाएको छ । हामीले घटना बारे थप अनुसन्धान गरी रहेका र्छौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रवक्ता इन्सपेक्टर लक्ष्मण वलीले भने, ‘अनुसन्धान पुरा भएपछि थप जानकारी दिने छौं ।’